I-model, ubuyela kwi talente - i-Geofumadas
I-model, ubuyela kwi talente
NgoNovemba, 2011 Microstation-Bentley, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Ukuziphendukela kwezinto zobuchwepheshe kwi-computer yendawo yesayensi kuyinkimbinkimbi, umthetho kaMoresi ubonakalise ngokunyaniseka ukuba akuyi kubakho kwiminyaka emibini ukusebenzisa i-Windows 7 ngaphandle kokusibona ngaphambili. I-AutoCAD i-2013 sele isandile kwiifom kwaye asizange sihlolwe Yintoni entsha kwi-AutoCAD 2012, phantse yonke into namhlanje ityala, ilula, ikhona Amaphepha am, kwi-USB, ngeposi okanye nakwifu.
Ngelishwa, isantya apho iinkqubo zihamba khona, akusoloko kuloo nqanaba; Oku kubonisa umqobo wokuzinzileyo kuba kulula kakhulu ukuphumeza iteknoloji entsha; kodwa akulula nje ukutshintsha umgaqo okanye ukwakha inkqubo esebenzisa ezo teknoloji ngendlela efanayo kwiiofisi ezahlukeneyo ngaphandle kokushaya impumlo nabantu abavaliweyo ukutshintsha okanye ukunyanzeliswa kwemigaqo yeenjongo ezilungileyo okanye ezimbi.
I-Bentley ibonise umxholo I-imodeli iminyaka emibini, xa ndikhumbula ukuba ndiyifumene loo nto njengongaphezu komntu. Kunyaka odlulileyo ndabona into esebenzayo, kwaye lo nyaka wesithathu ndiyaneliseka ukubona inkathazo enhle kwisifundo esifanayo esingaphaya kwesigcawu sinemfundiso yefilosofi ecatshulwa kakuhle, phantsi kwegama elithi "Masibuyele kwi talente".
Nangona i-Bentley Systems ibonakaliswe ngu-ngokugqithiseleyoubuchule bokudala, kwimeko yokulahlekelwa ukusetyenziswa kwabasebenzisi -u kutshaywa- kwilahleko sinxulumana izenzo ezibi kunokukhokelela kubasebenzisi bayo itshangatshangiswe e yomtshangatshangiso, rhoqo ukutshintsha indlela yomsebenzi eqhelekileyo. Oku esikubonayo iminyaka, ngokukhawuleza kwifom ye-dgn engatshintshiyo imfuno yecandelo le-16 kwi-32 bits, isixhobo esibonakalayo somsebenzisi kwaye ngoku umxholo we-I-model ubonisa ukuba ifilosofi.
Kwenzeka ntoni ukuba igama elithi "Masibuyele kwi talente"Kubonakala ngathi akuhambisani namaxesha ethu. Phantse yonke into isungulwe -si kholelwa-, kodwa ezininzi zezinto ezikhoyo zangoku asiyicombululi imfuno yethu yokwenza izinto ngokufanelekileyo. Sinobuchwepheshe obuphambili kakhulu, kwaye sinokuqhagamshelana nabantwana bethu ngaphesheya kwehlabathi ngokuchofoza lula skype, sinokuyilandela kwiprojekthi TeamViewer, qha ga mshelana nentombi ehambayo, njl. Kodwa sinenkinga enkulu ekugcineni ikhompyutha yethu ikhululekile kwiintsholongwane, ukuxhuma kwi-wireless nge-Windows 7 phantse isenzo sokholo kwaye siyaqiniseka ngokupheleleyo ukuba unyaka ozayo yonke into ibaluleke ngakumbi.
Oku kwenzeka ngenxa yokuba umbutho wabathengi kunye nobuqili kwezobuchwepheshe ngumtshato obulalayo. kuncinci kakhulu ukunikelwa oko sikwenzayo ngoku izixhobo eliphezulu uthi enozinzo kule minyaka 5 elizayo; nangona kunjalo kwindlela efanayo i-30 idlulileyo kwiminyaka edlulileyo. Siphinde sichaze kakhulu iinkqubo zendabuko, sikhohlwe ukuba xa zingekho kwiphepha, aziyi kuze zisebenze ngendlela ejikelezayo, kwaye ngokuqhelekileyo sikhohlwa umongo kwaye sibuza imibuzo yeendawo ezimbini ze-UTM ezitshisa enye ipayipi enye uhlobo lwecuba.
Isati e ngasentla ibonisa imigaqo emithathu yesiphakamiso sikaBentley sokubuyela kwi talente. Ndenenkathazo yokufumana uGreg ukuba angene kwicala, kodwa ekugqibeleni ndenze enye engcolileyo kwiphaneli yamehlo; kwifom yesimangalo ibonisa:
Idatha, ifakwe kwi-digital modeling yobomi boqobo.
Ukuhlanganiswa kweeprojekthi, ngokudibanisa neengxoxo ezininzi
Ukusingathwa kwezinto zangempela ngokumalunga nemodeli.
Kuya kubonakala kunengqiqo, kodwa ibonakalisa imveliso emithathu uBentley ethemba ukugxininisa kwiminyaka elandelayo ye-10:
I-Microstation, itafile yomsebenzi apho izixhobo ezahlukeneyo zobunjineli, i-Architecture, Construction zisebenza. Ukuthatha DGN elula ukuya kwelinye inqanaba (I-model) nangona a DGN kodwa zophuculo elungiselwe abasebenzisi isixhobo Bentley Map, Civil Power, Plant Vula, okanye nayiphi na enye into oko ayenzayo ongeze imodeli oluza izibaluli.
ProjectWise, njenge sixhobo soxhumano. Ingaba kukho kwi-USB, kwi-hard drive, kwi-mobile okanye efini, yindlela nawuphi na uqeqesho oluya kusebenzisana ngayo.
I-AssetWise, njengeziko lolawulo. Oku kungoku kutshanje kodwa kucaciswe ngokucacileyo, kunye nale mithetho ebuyisela imodeli emasimini idibeneyo, ikhumbuza ngokusoloko ukuba imo imane nje yindlela ekhohlakeleyo yokwenene kunye nobunzima obunzima ukuxelisa iplati 15 amamayela angaphandle.
Inceba yokuba le bentley bet iya kuhlala kubasebenzisi bayo; ngaphandle kokuba omnye wabazalwana enqwenela ukuba ngubupolitika okanye azibethe kwizenzo zonqulo. Kodwa kuba bethu baye bajonga le ndlela yokucinga, sifumana ukufunda oluxabisekileyo kwiinkqubo ezininzi zobomi; Okwangoku ndicinga ukuba sifingqa into ethile yento enesimo sengqondo esiphezulu se-Amsterdam:
Ndiyifumana into enomdla, ukuhlaziywa koko kuthetha ukuthini ukubuyela kwi talente; ukuba ngaphaya kokusondeza izicombululo ezenziwe ngetekisi etafileni kusinceda siphuphe iindlela ezintsha ukuzisebenzisa Isibane sikaAliddin. Kwaye ukuba italente yinto esenza ngayo ngezixhobo eziqhelekileyo, ukubona oko benzayo "damnIdonga leHoover Bypass inokusenza sikhohlwe ukuba uyilo lwenziwa ngamathuluzi alula njenge-Microstation, ungakhankanyi i-Expressway Bridge Design kwi-Hybrid AutoCAD / Microstation kaLu Zhuojun.
Ukubuyela kwi talente kuthetha ukucinga ngaphaya. Emva kweminyaka eyi-3 ndiya kuqonda ngokucacileyo oko bebhekisela kumzekelo we-I, kungekhona ngenxa yokuba kwakumsi womsila kodwa ngenxa yokuba yayingaphambi kweCharlotte kunyaka we-2008. Kuhleka -kwaye engavamile- umsebenzi odibeneyo abenzileyo nge-AutoDesk, ukukhangela izigidi zabasebenzisi befomathi ye-dwg / dxf, nangona inzuzo kwindlela echaseneyo ayifani ukulinganisela ekubeni i-I-model ingenziwa kuphela ngeprogram yeBentley; Abasebenzisi be-AutoCAD abaza kuqhubela i-Microstation kuba beva ilizwi elithi hypermodel.
Ukubuyela kwi talente kuthetha ukucinga ngomsebenzisi wokugqibela. Ngubani na obengatsho ngexesha ukuba ifayile DGN / DWG kufuneka zibonwe isikhangeli kwi Windows okanye Outlook. Kodwa ke ngoku yinto ebonakalayo neyinyani, kunokwenzeka kuphela ukubona kumda wesangqa ukuba nokuba Google unako, kodwa ukusondeza, ipani, thinta into, bona iimpawu zayo, Ubeko, jikeleza ibonakale e 3D okanye ngamnye (ikheswa) nganye. Kungenxa yokuba xa ndabona ngelo xesha, Bentley wayenethemba DGN ifayile wakhe wayeka ukuba kwifomati alaziwa ehlabathini, yaye ndizele oku ingcamango ngumsebenzisi ukuwela lwenbhulorho kodwa akanaye nakancane nendlela ethe yabalwa ngayo ukusika kwi-L / 4.
Ukubuyela kwi talente kuthetha ukugxininisa kwinjongo enye. Nangona izicwangciso zingatshintsha, umsebenzisi kufuneka abone ukuba siya kwindawo enye; Njengoko kwakunjalo ukuzama ukuphumelela kwe-Microstation eAthene, phantse akukho mntu wakuphawula kwaye ngoku i-interface ephuculweyo esivela kwi-XM yamkelwe ngabasebenzisi bayo. Ngendlela efanayo, ukunyanzeliswa yi-I-model kufuneka kugcinwe nangona inyaniso yokuba i-BIM ingachengiswanga; kodwa ukuhamba kwedatha ngoku kuvule iingcango zokusasaza ingcamango nangona kuya kuba kunye negama elinye -Ndiyathanda kwaye ayiyi iBIM, andiyakholwa ngoba imisebenzi yafa-.
Ngexesha elifanelekileyo nge-Bentley Systems, ukuthengwa kwangoko (ii-Pointools, Raceway, i-AECOSym) ziqinisekisa kuphela ukuba zizimisele ukugcina abasebenzisi babo ekukhangekeni kwezinto ezintsha, nge talente. Izivumelwano ezikhoyo kunye neMicrosoft, i-Adobe kwaye mhlawumbi i-Google kwikamva iza kunceda ukuba nefuthe elikhulu.
Ukuphinda uphinde uphinde athi into emibini edlulileyo: Bentley I-imodeli Ndandifuna masibe samkele i-dgn nje nge pdf. Mhlawumbi i-software yakho ayifikeli i-supermarket, ukuze uyikhuphe ngaphandle kwebhokisi, kodwa into ebonakalayo kukuba iziphumo eziveliswe kwimveliso yakho ziyakubonwa ngabani na oqonda ihlabathi lenene.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ngaba siya Microstation for Mac?
Post Next Imifolo AutoCAD - Ukusuka Data Station TotalOkulandelayo "